Ungabhala kanjani i-SEO ukubukeza inkampani enobungane?
Kunomkhuba wokuthi yonke imikhankaso yokukhangisa ephumelelayo iyasebenza. Abathengisi abanokuhlangenwe nakho ku-intanethi basungula isu labo ekusebenzelaneni nezilaleli ezihlosiwe. Amanye amabhizinisi amakhulu abuye abe neqembu elikhethekile le-PR lokuphatha iziteshi ezizungezile ukuze kuthuthukiswe ukutholakala kwemikhiqizo kwi-intanethi bese kudonsela amakhasimende amasha amasha. Inhloso eyinhloko yomkhankaso wokwenza umkhankaso wokukhangisa ukuthuthukisa ukuguqulwa kwewebsite nokuqashelwa kwezimpawu ngokuphendula amakheli amakhasimende.
Umsebenzi onzima futhi onzima ukudala izimpendulo ezihlakaniphile nezihlakaniphile njengoba igama ngalinye, isigwebo nesigcawu singathuthukisa noma ngokufanayo sichitha umkhankaso wakho wokuphromotha. Ubhala izibuyekezo zakho zenkampani ye-SEO hhayi kuphela kumakhasimende akho wamanje kodwa nakwabathengi abazoba khona abazogxila kumbiko wakho owenza ucwaningo.
Kunemithetho eminingi namaqhinga okudingayo ukuba ucatshangelwe ngaphambi kokuklama impendulo. Yiqiniso, abathengisi abanokuhlangenwe nakho okuhle kanye nabaphathi be-PR bangenza lo msebenzi cishe ngokwemvelo. Kodwa-ke, uma ungenayo ukuqonda okuzwakalayo kuzo zonke izici zokumaketha, amathiphu alandelayo azofika ngokusebenza kuwe ngesikhathi sokubukeza inkampani ye-SEO. Ngokulandela umhlahlandlela wethu omfushane, uzokwazi ukwakha umbono omuhle, wokuguqulwa-ukuziphatha mayelana ne-ejensi yakho futhi wenze amaklayenti akho akwazi ukuthembeka ku-brand yakho.
Amathiphu wokudala ukubuyekezwa kenkampani ye-SEO
Amazwi angukhiye aphezulu
Uma ungathanda ukuxhumana namakhasimende akho ngendlela efanele, udinga yazi imithombo yakho yesitoreji sewebhusayithi futhi uyibone kusukela ekubukweni komthengi. Ukukhomba amakhasimende akho angahle, udinga ukhethe amagama angukhiye afanelekayo nokwenza imali futhi ucwaninga niche yakho yemakethe. Ngaphezu kwalokho, udinga ukubuka kumawebusayithi afakwa ekhasini lokuqala lokusesha. Ukuze usebenzise isu lokuphendula, kufanele uqaphele ukuthi amakhasimende akho angakuthola kanjani indawo yakho phakathi kwezinye izizinda ezihlobene. Njengemakethe yedijithali akuyona inkimbinkimbi ehleliwe futhi eguquguqukayo, kufanele ulungele ukusebenzisa isu eliguquguqukayo kwisu lakho lokubeka phambili. Kufanele ulandele ngokuqhubekayo izinguquko ekubonweni kwamakhasimende akho okungenzeka ukuthi ulungele ukusabela ngokushesha. Ungazuza ngokusebenzisa amanye amathuluzi e-intanethi njengababukezi bokubukeza ukufaka ukulawulwa ngaphansi kwesimo.
Namathela endleleni yokuthengisa
Ngenkathi udala izimpendulo kumakhasimende akho kumthombo wakho wewebhu noma imithombo yangaphandle njenge-Wot, I-TripAdvisor, i-Yelp nokunye okunye, qiniseka ukuthi ubhala ithoni yokuthengisa. Okokuqala, ukubuyekezwa kwakho kufanele kuchazwe ngokukhathazeka kwamakhasimende nemibuzo kanye nokuncoma. Udinga ukuhlinzeka ngamakhasimende akho wamanje namathemba anokuqonda kwekhwalithi mayelana nebhizinisi lakho ukwenza ukuba balandele isizinda sakho esiyinhloko. Qiniseka ukuthi udala isibuyekezo sakho ngethoni enhle neyethinta. Ngineluleka ukuba ugweme noma yikuphi ukujwayela, amagama angamahlazo noma imibono yezombusazwe. Kungabangela abasebenzisi impendulo engalungile. Ukubuyekezwa kwakho kufanele kube nokwazisa kakhulu, kuhlelwe kahle futhi kusetshenziswe ukuthengisa. Kufanele unikeze isaziso kubavakashi bakho bewebhusayithi, ubatshele emkhiqizo noma isevisi yakho entsha. Ngaphezu kwalokho, uma unikeza abafundi ngolwazi lwangaphakathi mayelana nosuku lokukhishwa noma lokudayiswa kwemikhiqizo yakho entsha, uzothuthukisa ngokuzenzakalelayo inani lempendulo Source .